स्वास्थ्य समस्या देखिए घरमै गएर सेवा दिइरहेका छौं : नगरप्रमुख ओझा - Morning Bell
कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकार (अंक–४)
रमा भट्टराई / प्रभाकर बागचन्द डडेल्धुरा	वैशाख २३, २०७८
आज हामी निराश छौं । हरेक परिवारसंग आफ्नै भोगाई छन् । कसैले परिवारजन, कसैले आफन्त गुमाएका छन् । कयौं उपचारको लागि तड्पिरहेकाछन् । कोहि संक्रमण हुन्छ कि भन्ने त्रासमा बांचिरेका छन् ।
परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि आफन्तको मृत्यु हुँदा मलामी जान सकिदैन । अफ्ठयारो पर्दा छिमेकीको मद्दत गर्न सकिन्न । मन आत्तिदा, अफ्ठयारो महसुस गर्दा अँगालोको आशा गर्न सकिँदैन । यस्तो अध्यारो समयमा सकारात्मक बन्नुहोस् मजबुत बन्नुहोस् भन्दा कतिपयलाई थप पीडा दिन सक्छ । जब चोट लाग्छ ऐया त भन्छ मान्छेले । ऐया भन्नुपर्छ तर पीडाले आफूलाइ दवाउन दिनु हुँदैन । पीडाको बोझ तल दबिएर जीवनको सार्थकता गुमाउनु हुँदैन ।
मृत्यु जीवनको शाश्वत सत्य हो । मृत्युको सौन्दर्य भनौं वा कुरुपता मृत्यु निश्चित भएपनि कहिले हुने तय हुँदैन। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दा मृत्यु तय भएपनि हरेक पल बाँचेर त्यो पलका लागि मृत्युलाई परास्त गर्नुपर्छ । डाक्टरले पनि औषधि उपचार गरेर हामीलाई बचाएका हुँदैनन् । बरु मृत्युलाई केहि पर सारिरहेका हुन्छन् ‘पोस्टपोन’ गरिरहेका हुन्छन् । मृत्युलाई हरेक पल पर सार्नुपर्छ । यसको अर्थ हरेक पल बाँच्नुपर्छ । ‘एकपल’मा पुरा जीवन बाँच्नु पर्छ ।
कोभिडको यस कहालिलाग्दो समयमा हामीले बाँच्ने शक्ति देखाउनुपर्छ । एकआपसलाई ढाडस दिनुपर्छ । हामीले गुमाएकाहरुका यादलाई सम्हाल्नुपर्छ । उनीहरुका अधुरा सपना पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । उनीहरुको जिन्दगी पनि बाँच्नु पर्दछ । आशा अर्थात ‘होप’को अर्को नाम नै जीवन हो । आशा जग हो जीवनको, आशा, विश्वास, भरोसा बाँडौ । भोलि सुन्दर विहानी हुनेछ । भोलिनै त्यो दिन हो जसका लागि आज जिउन योग्य छ ।
अब सबैले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी साथ पालन गरौं । हाम्रो प्रयासले नै हाम्रो समाज, हाम्रो देश, पुरा विश्व फेरि रफ्तारका साथ बढ्नेछ । नयाँ सोचका साथ अगाडी बढ्ने छ ।
विचार र व्यवस्था
कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकारको आजको अंकमा हामीले डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझा (विपिन)संग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ नगरप्रमुख ओझासंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
मेयर साब अमरगढी नगरपालिकालाई कसरी चिनाउन चाहनु हुन्छ ?
अमरगढी नगरपालिका प्रदेशकै केन्द्रविन्दुमा रहेको नगरपालिका हो । अमरगढी नगरपालिका नेपालको रक्षार्थ युद्द गर्ने वीर सपुत अमरसिंह थापाको नाम बोकेको भूमि हो । यो सामाजिक क्रान्तिका नायक भीमदत्त पन्तको थलो पनि हो । भौगोलिकरुपमा निकै रमणीय र सम्भावना बोकेको नगरपालिकाको रुपमा यसलाई बुझेको छु । पाँचवटा तत्कालिन गाविसहरु मिलाएर बनाएको यो नगरपालिकामा ११ वटा वडाहरु रहेका छन् । १३९ वर्ग किमी यसको क्षेत्रफल रहेको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार यहाको कुल जनसंख्या २१२४५ रहेको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ । पालिकाले नियन्त्रणका लागि के गर्दैछ ?
यति बेला हामी मात्र होइन मुलुकनै संवेदनशिल अवस्थामा छ । कोभिड महामारीका समयमा हाम्रा चुनौती पनि छन् । सातवटा पहाडी जिल्लाको केन्द्रमा डडेल्धुरा जिल्ला र अमरगढी नगरपालका रहेको छ । संघीय सरकारको एउटा मात्र हस्पिटल यस जिल्लामा रहेको जो यस पालिका भित्र पर्छ । जुन चाहिँ सात वटा पहाडी जिल्लाको रिफरल हस्पिटलको रुपमा रहेको छ । गत वर्षको अुभवले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । हामीले एउटा टास्क फोर्स बनाएका छौ । अमरगढी नगर पालिकामा रहेका ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारीको अवस्थामा राखेका छौं । जना महिला स्वास्थ्य स्वयमसेवीकाद्वारा गाउँ–गाउँमा चेतनामुलक कार्यक्रम गरेका छौं ।
पालिका भित्र स्वास्थ्यचौकी, अस्पतालहरु कति छन् ? ती ठाउँमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरुको उपस्थिति कस्तो छ ?
अमरगढी नगरपालिकाको आन्तरिक संरचनाको कुरा गर्दा ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । १० जना स्टाफ नर्स विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम मार्फत क्रियाशिल छन् ।
पालिका भित्र एम्बुलेन्स, औषधि र अक्सिजनको व्यवस्था कस्तो छ ?
हस्पिटलमा अक्सिजनको एउटा प्लान्ट जडान गरिएको छ । यसको क्षमता कम हुँदा दैनिक रुपमा तराईका जिल्लाबाट अक्सिजन मगाइरहेका छौं । यो प्रयाप्त नभएका कारण उच्च क्षमताको अक्सिजनको प्लान्ट जडान गर्न संघीय सरकारसँंग माग गरेका छौं । यसमा लागेका छौं । संघीय सरकारको एउटा अस्पताल यो नगरपालिकामा छ । २५—२६ मेडिकल अफिस र कन्सलटेन्टहरु यहाँ कार्यरत छन् । करिव १५० को हाराहारीमा स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् ।
आइसोलेसन कक्षहरु निर्माण गरिएका छन् ? छन् भने कति बेडका छन् ? अक्सिजनको उपलव्धता कस्तो छ ?
जिल्ला हस्पिटलमा आइसोलेसन कक्ष छ । त्यो करिब ४० बेड क्षमताको छ । त्यहा अहिले २६ जना नियमित अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीहरु छन् । अमरगढी नगरपालिकाले निर्माण गरिएको आइसोलेसनमा २० बेडको व्यवस्था गरेका छौं ।
कोभिडका गम्भिर खाले बिरामीलाई थप उपचारका लागि अन्यन्त्र रिफर गर्नु परे के व्यवस्था छ ?
जिल्ला हस्पिटलमा तीनवटा एम्बुलेन्स छन् । अरु पालिकामा भएका एम्बुलेन्स पनि तयारी अवस्थामा राखिएका छन् । अहिले हामीले विरामीलाई धनगढीको सेती प्रादेसिक अस्पतालमा पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौं ।
कोरोनाको जोखिम कम गर्न अहिले भ्याक्सिन प्रभावकारी देखिएको छ । पालिकाका कति जनताले भ्याक्सिन लगाएका छन् ?
भ्याक्सिनको कुरा गर्दा यसको प्रभावकारीताबारे बुभ्mनु पर्ने हुन्छ । हाम्रो पालिकामा भ्याक्सिन लगाउनेको संख्या उच्च छ ।
पुरै पालिकाका जनताले कहिलेसम्म भ्याक्सिन पाउछन्, के छ योजना ?
यसका निम्ती त नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराउने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर अहिले स्थगित गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, स्थिति भयावह नहोस् भन्नका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था के छ ?
मैले अगाडि पनि भने हामीले उचित व्यवस्था गरेका छौं ।
अहिले भारतबाट फर्किरहेका व्यक्तिहरु सिधै गाउँ–गाउँमा गएका छन् । त्यसले त संक्रमणको जोखिम बढाउँछ । संक्रमण नफैलिओस् भन्नका लागि के रणनीति अपनाउनु हुन्छ ?
मुख्यतया जनचेतना बढाउने कुरा हो । हामीले यसका लागि स्वयमसेवीकाहरु परिचालन गरेका छौं । केस आउने वित्तिकै खोजिनीति गर्ने र टेस्टको दायरामा ल्याउने हाम्रो प्रथमिकतामा पर्छ ।
होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरुलाई कसरी सेवा पुर्याउनु हुन्छ ?
होम आइसोलेसनमा बसेकालाई निगरानीमा राख्ने मात्र काम गरेका छौं । उहाँहरुमा सामान्य समस्या देखिए स्वास्थ्यकर्मी घरमै गएर सेवा दिने गरेका छन् । अलि जटिल भए जिल्ला अस्पतालमा ल्याउँछौं ।
कोरोनाको दोस्रो लहर निक्कै खतरनाक सावित भैरहेको छ । यो अवस्था लामो समयसम्म पनि नियन्त्रणमा आएन भने दैनिक ज्यालादारी गर्ने र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका वर्ग र समुदाय प्रभावित हुन्छन् । ती वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न र राहतका लागि के व्यवस्था गर्छ पालिकाले ?
यस वर्ष प्राधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि छ । श्रम गर्ने नागरिकलाई नियमित श्रम गर्ने वातावरण मिलाएका छौं । श्रम गर्ने मानिसहरु भोको पर्दैनन् ।
कोरोना महामारीको अन्त्य कहिले हुन्छ अनिश्चित छ । अब कोरोना नियन्त्रणका लागि के रणनीति अपनाउनु हुन्छ ?
बाहिरबाट आउने मानिसको खोजिनीति गर्नु, निगरानीमा राख्नु प्रमुख हो । अर्को कुरा टेष्टको दायरालाई बढाएका छौं । हप्तामा तीन दिन आइतबार, मंगलबार र विहीबार नगरपालिकामै स्वाब संकलन गरेका छौं ।
महामारीमा आम जनता गलत सूचनाको पनि सिकार बन्छन् । पालिकाबासीमा सहि सूचना कसरी प्रवाह गरिरहनुभएको छ ?
यसका लागि हामीसंग भएको प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरेका छौं । अडियो म्यासेज मेरै आवाजमा नागरिकहरुलाई दिने प्रयत्न गरेको छु । यहाँका एफएम पत्रपत्रिका मार्फत पनि हामी संदेश दिइरहेका छौंं । हाम्रो सूचना प्रविधी केन्द्र, वेवसाइट र फेसबुक पेज मार्फत सबै सूचना पु¥याइरहेका छौं ।
पालिकाको मुख्य चुनौती के हो ?
नागरिक अलि जिम्मेवार बन्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । नागरिकमा बाहिरबाट आउदा राज्यलाई ढाँट्ने, छल्ने प्रवृति देखिएको छ । उँहारुले राज्यलाई मात्र होइन आफ्ना परिवारलाई पनि ढाँट्दै हुनुहुन्छ । आफू ठिक भए पनि रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ । बाहिरबाट आएपछि क्वारेन्टाइनमा बस्ने हुनुपर्छ । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाए महामारी नियन्त्रणमा आउँछ । अधिकारका साथ जिम्मेवारी निभाउन पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
अन्तमा के भन्न चाहनु हुन्छ पालिका वासीलाई ?
सबै अमरगढी नगरपालिकाका बासिन्दा र दाजुभाई दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने राज्यले गरेका अनुरोध र अपिललाई गम्भिरताका साथ लिएर पालना गरिदिनुस् । कोरोनाबाट आफू पनि बाँच्नुस र अरुलाई पनि बचाउनुहोस् भनेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
२३ वैशाख २०७८, बिहीवार १०:१६ बजे प्रकाशित
बिल गेट्सले मेलिन्डाको नाममा ट्रान्सफर गरे २.४ अर्ब डलरको
सुनको मूल्य फेरि बढ्योे